Senator Obama oo Senator Hillary kaga guuleystay Gobolka Wyoming | maakhir.com
Senator Obama oo Senator Hillary kaga guuleystay Gobolka Wyoming
Washinton:- Waxa soo shaac baxday Codadka Gobolka Wyoming ee ay kala heleen Labada Musharax ee kala ah Senator Obama iyo Senator Hillar,iyada oo la sheegay inuu Ninka Madaw ee Obama kaga guulaystay Gabadha la loolamaysa ee Hilliray Cilinton, Gobolkaasi oo la sheegay inay dadka inta badni u codeeyeen Senator Obama.
Senatorka Madow ee loolanka ugu jira in xisbigiisu u magacaabaan inuu u tartamo aqalka Cad ee dalka maraykanka Barrack Obama
ayaa kaga adkaaday Hillary Clinton gobolka ugu dadka yar ee dalka Maraykanka ee Wyoming.
Gobolkaasi oo ku badan dadka Xisbaaniga ayuu Mr. Obama ka helay boqolkiiba 60% halka Hillary Clinton ay ka heshay 40%.
Obama ayaa u muuqda inuu dib uga soo kabanayo jabkii ka soo gaaray gobollada Ohio, Texas iyo Rhond Island oo ay ku badisay Hillary Clinton, iyada oo Gobolada Texas iyo Island ay Hillray Cilton ka dhigtay wacadro xoogan iyada oo heshya Codad badan.
Gudi idha idhaynaya Loolankaasi ka dheexa labaasi Musharaxa ayaa sheegay in Qofkiiba tirada guud ee Kuraasta laga duunayo 2025-Cod, Halka Sentaro Obama la cadeeyay inuu wakhitigan Gacanta ku haysto codad dhan 1,578, Halka Sentor Hillray ay iyana haysato 1,468- Kuris.
Gudigaasi waxay kaloo soo bandhigeen Maalinta Salaasada ah inay Labadaasi Musharax ku tartami doonaan Gobolka Missisibi oo sida la saadaaliyay uu codadka inta badan heli doono Senator Obama.
« Ciidamada DFS ayaa gabi ahaanba ka baxay Gudaha Suuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho
Mid ka mid ah Nabadoonada Gobolka Sanaag ayaa si kulul uga hadlay Xadhigii ay Puntland kula kacday Nabadoon Cabdi Faarax »